हरेक पुरुषले महिलाबाट चाहने मुख्य ६ कुरा के के हुन ? – Online Bichar
हरेक पुरुषले महिलाबाट चाहने मुख्य ६ कुरा के के हुन ?
Online Bichar 16th February, 2018, Friday 9:28 PM
काठमाडौं, पुरुष र महिलाको सम्वन्ध अत्यन्तै गाढा र मधुर हुन्छ । पुरुष र महिलको सम्वन्ध राम्रो र नराम्रो हुनुले घर र समाजकै प्रगति र उन्नतीमा विकास र वाधा उत्पन्न हुन्छ । पुरुषले महिलाबाट र महिलाले पुरुषबाट के चाहेका हुन्छन् भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न गाह्रो हुन्छ । तर पनि हरेक पुरुषले महिलाबाट के अपेक्षा गर्दछन् यहाँ अध्ययन गरौं ।
अघिकांश पुरुष महिलाबाट आफू के चाहन्छन्, भन्न हिच्किचाउँछन् । तर, त्यसको अपेक्षा भने राखिरहन्छन् । अपेक्षा पूरा नहुँदा व्यवहार पनि बदलिने गरेका उदाहरण धेरै छन् । जानौँ, के चाहन्छन् पुरुषहरू महिलाबाट
प्रोत्साहन – पुरुषहरू प्रोत्साहनका निकै प्यासी हुन्छन् । आफूले माया गर्ने व्यक्तिले आफूलाई प्रोत्साहित गरोस् भन्ने उनीहरूको इच्छा हुन्छ । त्यस्तै, आफूलाई विश्वास गर्ने पुरुषहरू निकै मन पराउँछन् । महिलाको साथले पुरुषको इच्छाशक्ति नै परिवर्तन गर्न पनि मद्दत पुर्‍याउँछ ।
प्रशंसा – प्रशंसा पुरुषको पनि प्रिय हुन्छ । तर, झुटो प्रशंसा गर्नाले फाइदा गर्दैन । राम्रो कुराको तारिफले सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
मधुर आवाज – पुरुषहरू महिलाले सुरिलो आवाजमा बोलेको मन पराउँछन् । महिलाको मधुर आवाजले पुरुषलाई प्रभावित पार्न र शान्त बनाउन पनि धेरै मद्दत गर्छ । कदर स् आफूले गरेको कामको कदरको अपेक्षा पुरुषको स्वाभाव हो । आफ्नो काममा धन्यवाद मात्रै पाए पनि उनीहरू फुरुंग हुन्छन् ।
काठ्माडौं, ११ फागुन २०७८ । कलाकार तथा गायक जयनन्द लामाको निधन भएको छ । बुधबार…
काठमाडौं, ४ फागुन २०७८ । भारतीय संगीत क्षेत्रका चर्चित एवं लोकप्रिय संगीतकार तथा गायक बप्पी…
काठमाडौं, ३ फागुन २०७८। वरिष्ठ साहित्यकार तारानाथ शर्माको ८७ वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ…